NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်အီဂျစ်အမျိုးသားမီဒီယာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အဘို့အပ်ဒိတ်များမာစတာထိန်းချုပ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
Home » သတင်း » အီဂျစ်အမျိုးသားမီဒီယာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အဘို့အပ်ဒိတ်များမာစတာထိန်းချုပ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ဒူဘိုင်း, ယူအေအီး, 8 စက်တင်ဘာလ 2019 - ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ယခင်ကအီဂျစ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသမဂ္ဂ (ERTU), အဲဂုတ္တုပြည်၌အမျိုးသားထုတ်လွှင့်အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့အီဂျစ်အမျိုးသားမီဒီယာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (ENMA) အတွက်လုံးဝ updated မာစတာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်။ ဒီစက်ရုံ၏ phased အဆင့်မြှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခံနိုင်ရည်၏မြင့်မားသောအဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်သည်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ IP ကိုတစ်ရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောအကူးအပြောင်းသေချာသည်ထုတ်လွှင့်မယ့်တည်ဆဲအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်ထားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာစတာထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းနှင့် ဂြိုဟ်တု အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေး၏မစ်ရှင်-အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများနေကြတယ် "ဟု Rafaat Younes, အီဂျစ်အမျိုးသားမီဒီယာအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှာစတူဒီယိုစီမံကိန်းများဌာနအကြီးအကဲညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ ENMA အမျိုးသားထုတ်လွှင့်သည်နှင့်အီဂျစ်ပရိသတ်တွေဖို့ဦးဆောင်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများထုတ်လွှင်အမျှ "ကျနော်တို့စစ်ဆင်ရေးကိုအဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့်ကောင်းစွာသက်သေပြကြောင်းကိရိယာများတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဝေဟင်အပေါ်တည်းခိုထိပ်တန်းဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ်ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာများနှင့်အတူယနေ့အထိပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြောင်းအရေးပါခဲ့ပါတယ်။ "
Younes တစ်ဦးနှစ်ရှည်လများမိတ်ဖက်အဖြစ် "ကဆက်ပြောသည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့ဆည်းကပ်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့ဖို့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၏အားသာချက်ယူနိုင်ခဲ့ပုံကိုပြသသည်။ "
အဆိုပါမာစတာထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲမှာ ENMA ရဲ့လေးအမျိုးသားရေးပရီမီယံလိုင်းများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာနှင့်အတူအဓိကအားစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိ၏ ကဖြစ်ပါတယ်အတူ ဂြိုဟ်တု Nilesat မှတဆင့် ENMA ဖြင့်ကယ်လွှတ်အပေါငျးတို့သညျအခွား channel များကိုစောင့်ကြည့်ရသောထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်း။ ကနေကွန်ယက်, စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက်တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ENMA မသာပေါ်-air သည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်၏သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ရရှိ, ကလည်း software ကိုဗဟိုပြု, IP ကို-based ထုတ်လွှင့်ဗိသုကာဆီသို့အကူးအပြောင်းလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်တွင်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Anas Hantash, Mesa နှင့်မြောက်အာဖရိကမှာဦးခေါင်း ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ENMA တိုးတက်စစ်ဆင်ရေးမှတဆင့်၎င်း၏စွမ်းရည်များချဲ့ထွင်ရန်လိုခငျြ ", ကဆက်ပြောသည်။ ကျနော်တို့နှောင့်အယှက်မရှိဘဲ၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေး၏ကျန်နှင့်အတူပေါင်းစည်းမည်ဟုသောလမ်းအတွက်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အသစ်မာစတာထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းနှင့် ဂြိုဟ်တု အခန်းထဲမှာဥပမာ, SDI ကျော်ကတခြားအမွေစနစ်များနှငျ့ဆကျသှယျနှင့် ENMA သစ်ကိုထိရောက်စွာဖန်တီးသူတို့ IP ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုလမ်းကြောင်းအပေါ်လာမည့်ခြေလှမ်းကိုယူတဲ့အခါမှာစွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ "
အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ENMA ရဲ့စက်ရုံသို့ထည့်သွင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြေရာအတွက်တိုးချဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှင့်လက်ငင်းပေး, ဘက်ပေါင်းစုံပလက်တီနမ် SX Pro ကိုမြင်ကွင်းစုံနှင့်အတူပလက်တီနမ်™ IP3 Router ကပါဝင်သည်။ ENMA အနေနဲ့အားလုံး IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများဆီသို့ဦးတည်လာမယ့်ခြေလှမ်းကိုယူဖို့အဆင်သင့်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ထိုပလက်တီနမ် IP3 ပေးခြင်း, သူတို့ကို IP ကိုကျော် compressed လုပ်မထားတဲ့ဗွီဒီယိုကိုအကူးအပြောင်းနှင့် display တွေရာပေါင်းများစွာကျော် PiPs ရာပေါင်းများစွာစောင့်ကြည့်ဖို့ multiplexing အိုင်ပီစီးအပြည့်အဝအားသာချက်ယူနိုင်ရန်မြင်ကွင်းစုံကို enable လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ENMA ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ရဲ့မော်နီတာထပ်ပြောင်းဖို့စွမ်းရည်။
ပလေးအောက်ကိုမှစားသုံးမိရာမှဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် Selenio ™ MCP နှင့် Selenio 6800 + ™ အသုံးပြု. အချက်ပြအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ပြောင်းလဲခြင်း - တစ်ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် Hewlett Packard လုပ်ငန်းစံ server များပေါ်တွင်အပြေးဆော့ဖ်ဝဲ application - အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းကိုလည်း Nexio + ™AMP®အဆင့်မြင့်မီဒီယာပလက်ဖောင်းပါဝင်သည် module တွေ။
အဆိုပါစနစ်နှင့် တွဲဖက်. ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာခဲ့သည် ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ'' စနစ်များကိုပေါင်းစပ်မိတ်ဖက်, ပေါင်းစည်းဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ။ အဆင့်နှစ်ခုစက်တင်ဘာလ 2019 အတွက်တိုက်ရိုက်မသွားကြောင့်နေစဉ်စနစ်၏ပထမအဆင့်, ဇူလိုင်လများတွင်လေထုအပေါ်သွားလေ၏။
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများမျှရပ်တည်ချက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ IBC1 မှာ 61.D2019 (13-17 စက်တင်ဘာလ, အမ်စတာဒမ် RAI) ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.imaginecommunications.com.
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ ေူပာင်းလဲဆန်းသစ်တီထွင်မှုကနေတဆင့်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအာဏာ။ ထုတ်လွှင့်, ကွန်ယက်များ, ဗီဒီယိုကဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကမ္ဘာတဝှမ်းကသူတို့မစ်ရှင်-အရေးပါသောလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ဖို့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ optimized အနာဂတ်-သက်သေပြ, multiscreen ဗီဒီယိုနှင့်ဝင်ငွေပေးရန်ဖြေရှင်းချက်အပေါ်အားကိုး။ ယနေ့ကမ္ဘာ့ဗီဒီယိုအားလိုင်းများ၏တစ်ဝက်နီးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြတ်သန်း, ငါတို့ software ကိုဖြေရှင်းချက်အနီးကပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြော်ငြာဝင်ငွေတတိယဖို့ကားမောင်း။ စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမှတဆင့်ကျနော်တို့အများဆုံးအဆင့်မြင့်အိုင်ပီ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် cloud-enabled, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ကွန်ယက်နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ပို့ဆောင်နေကြသည်။ အလည်အပတ် www.imaginecommunications.com ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာ @imagine_comms.
amp အဆင့်မြင့်မီဒီယာပလက်ဖောင်း Anas Hantash ထိရောက်မှု အီဂျစ်အမျိုးသားမီဒီယာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အီဂျစ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပြည်ထောင်စု ENMA ERTU ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် IBC2019 ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Nexio လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခံနိုင်ရည် ပလက်တီနမ် IP3 Router ပလက်တီနမ် SX Pro ကိုမြင်ကွင်းစုံ ပလေးအောက်ပလက်ဖောင်း Rafaat Younes ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှု လုံခွုံရေး Selenio 6800 + Selenio MCP အဆင့်မြှင့်တင်	2019-09-09
နောက်တစ်ခု: အတ္ထုပ္ပတ္တိ-ဗဟိုပြု, ဒိန်းမတ်'S တီဗီ2/ FYN FOR အနာဂါတ် cloud-base သတင်းကဏ္ဍညျဆောကျရနျ MEDIABILITY
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့်ဗီဒီယို Editor ကို